हिंसापीडित युवतीसँग माल्भिका सुब्बाले माफी मागिन, यस्तो ७ सात पृष्ठ लामो पत्र « Janata Times
काठमाडौं, जेठ ५ । पूर्वमिस नेपाल माल्भिका सुब्बाले माफी माग्नुभएको छ । हिंसापीीडत महिलालाई सहयोग नगरेको बिषयलाई लिएर सुब्बाले आज सामाजिक सञ्जालमार्फत माफी माग्नुभएको हो । सामाजिक सञ्जाल टिकटकमार्फट पीडितले आफूमाथि बलात्कार भएको विषयमा सुब्बालाई भन्दा वेवास्ता गरेको आरोप लगाएकी थिइन्। पीडितको कुरापछि सुब्बामाथि फेसबुकमा लामो पोष्ट लेख्दै माफी माग्नुभएको हो ।
‘म माफी माग्न चाहान्छु, मलाई राम्रोसँग याद छैन, उनीमाथि भएको के थियो भनेर तर मलाई याद छ तिमीले मलाई फोन गरेकी थियौ र कुरा गर्न खोजेकी थियौ तर त्यो समयमा तिमीलाई सहयोग गर्न सकिन। जुन समयमा तिमीलाई मेरो आवश्यक्ता थियो,’ सामाजिक सञ्जालमा अंग्रेजीमा लामो धारणा राख्दै माल्भिकाले लेख्नुभएको छ। आफूले त्यसबेला कमजोरी गरेको पनि माल्भिकाले स्वीकार गर्नुभएको छ ।
उहाँले पीडितलाई सम्बोधन गर्दै अगाडि लेख्नुभएको छ, ‘यो माफी दिन योग्य छैन र मैले तिमीबाट यो आशा पनि गरेकी छैन। म माफी माग्न चाहान्छु त्यो समयमा मैले तिमीलाई राम्रोसँग सुनिन र विश्वास गरिन र सहयोग पनि गरिन। त्यसैले तिमी मप्रति रिसाउनु जायज छ यो सबै कुराको लागि म योग्य छु। मैले सामाजिक सञ्जालमा तिम्रो पोष्टहरु हेरेपछि त्यसपछि तिमीले भोगेका कुराहरुको लागि म जिम्मेवार छु। मलाई थाहा छ, अहिले धेरै ढिला भैसकेको छ। तर अब तिम्रो लागि मैले जे गर्न सक्छु त्यो गर्नका लागि म तयार छु।’
मैले त्यतिबेला उनीसँग लामो कुराकानी गर्नुपर्थ्यो। उनलाई भेट्नुपर्थ्यो र उनको हात समाएर अंकमाल गर्नुपर्थ्यो। म उनीसँगै हुनुपर्थ्यो। मैले केही न केही गर्नुपर्थ्यो। उनले भनेजस्तै एकपटक सोध्नुपर्थ्यो कि तिमीलाई ठीक छ ? तर मैले गरिनँ। यो ८ वर्षमा मैले यी कुरा गर्नुपर्थ्यो। खासगरी मी२ आन्दोलन चलिरहँदा तर फेरि पनि मैले गरिनँ। त्यसकारण मेराप्रति आउने घृणाभावको लागि म योग्य छु। किन कि एक महिलाको हिसाबले, एक मानवको हिसाबले। तर म यसमा असफल रहेँ
सुब्बाले यस घटनापछि त्यो संस्थासँगको सम्बन्ध भने तोडने बताउनु भएको छ । ‘सायद यो ८,९ वर्ष अगाडिको कुरा हुनु पर्छ उनले मलाई फोन गरेकी थिइन्। त्यो बेला मलाई लागेको थियो उनले आफुनो हैन अरु अरुको कुरा सुनाएकी थिइन्। म सबैसँग माफी माग्न चाहान्छु। यो सबै कुरा आइसकेपछि मैले अब त्यो कार्यक्रम (इभेन्ट) र आयोजकसँगको सबैखाले सम्बन्ध चाँडै तोड्दै छु। म सम्झिन्छु कि त्यो समयमा तनावसँग जुधिरहँदा त्यो कति खराब स्थान हो। त्यसलगत्तै वैवाहिक सम्बन्ध छोडिरहेको थिएँ र म आफैँ सहयोगको खोजीमाा थिएँ। अहिले मलाई लाग्छ मेरो त्यतिखेरको क्रियाकलाप वा चाल्नुपर्ने कदम चाल्न नसकेकोमा मेरो ठूलो गल्ती हो। जसले उनीमाथिको अन्यायलाई प्रश्रय दिन योगदान गर्यो,’ माल्भिकाको भनाई छ ।
माल्भिकाले थप्नुभएको छ, ‘मैले त्यतिबेला उनीसँग लामो कुराकानी गर्नुपर्थ्यो। उनलाई भेट्नुपर्थ्यो र उनको हात समाएर अंकमाल गर्नुपर्थ्यो। म उनीसँगै हुनुपर्थ्यो। मैले केही न केही गर्नुपर्थ्यो। उनले भनेजस्तै एकपटक सोध्नुपर्थ्यो कि तिमीलाई ठीक छ ? तर मैले गरिनँ। यो ८ वर्षमा मैले यी कुरा गर्नुपर्थ्यो। खासगरी मी२ आन्दोलन चलिरहँदा तर फेरि पनि मैले गरिनँ। त्यसकारण मेराप्रति आउने घृणाभावको लागि म योग्य छु। किन कि एक महिलाको हिसाबले, एक मानवको हिसाबले। तर म यसमा असफल रहेँ।’